गर्भावस्था को समयमा कसरी सुत्न: के सबै भन्दा सुविधाजनक र बच्चा लागि सुरक्षित पुऱ्याउन
एक बच्चा राखेका महिला, अनजानमा बारेमा धेरै कुराहरू चिन्ता गर्न थाल्छ। र यो आसपास, दुर्भाग्य, केवल अनावश्यक अलार्म थप्नुहोस्। गर्भावस्था अझै पनि अनुमान र अन्धविश्वास सबै प्रकारका सम्बन्धित छ। सी गर्न, सिलाइ बुनाइ, बिरालो stroking आफ्नो पेट मा सुतिरहेको - दुखी expectant आमा केहि हुन सक्दैन। र कुनै पनि प्रतिबन्ध साँच्चै निष्क्रिय fancies भने, सुत्न लागि मुद्रा फरक बनाउन सक्छ। गर्भावस्था कसरी सुत्न, कति घण्टा तपाईँले गर्नुपर्ने के गद्दा झूठ गर्न सबै भन्दा राम्रो छ मा आराम गर्न समर्पित? म झ्याल मा सुत्न सक्नुहुन्छ? हामी विस्तृत मुद्दा बुझ्न हुनेछ।
भविष्यमा आमा मा सो विकारहरु सामान्य श्रेणी मा फिट। शरीर reconstructed छ, हर्मोन परिवर्तन, feverish गतिविधिको अवधि lethargy र पनि निराशा को अवधि पछि। तर निदाउरोपनको अनिद्रा भन्दा बढी लाभप्रद गर्न सकिँदैन। निद्रामा लागि वृद्धि आवश्यकता एक गर्भवती महिला को लागि बिल्कुल सामान्य छ। उनको शरीर ऊर्जा को ठोस फोहोर लागि तयार छ, बिजुली जम्मा।
गर्भावस्था को समयमा सुत्न कसरी सोच, expectant आमा आफूलाई कडा लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। महिला अक्सर धेरै महत्त्वपूर्ण पूर्णतया सबै प्रदान गर्न प्रयास मा थकान गर्न आफूलाई ल्याउन भन्दा आराम छ कि बिर्सनुहुन्न। शरीर हुनेछ पक्कै चयन निद्रामा लागि गलत स्थिति संकेत दिन्छ। त्यसैले सडक तल हिंड्न पूर्ण सबै गर्न हस्तक्षेप प्रयासहरू, राम्रो पटक को सट्टा। साथै, यो reconstitution मजबूत ओछ्यानमा बढवा दिन्छ।
के स्थिति म सुत्न सक्दैन?
बस गर्भावस्था को पहिलो trimester मा भनेर याद गर्न एक महिला खडा गर्न लागि कुनै पनि चलनअनुसारको मा सुत्न सक्नुहुन्छ चाहन्छु। यो कुनै पनि नकारात्मक लक्षण कारण छैन। यदि तपाईं पनि सुत्न चाहन्छु कि गर्भावस्था को प्रारम्भिक चरणमा आफ्नो पेट मा कुनै contraindications छन्। अप्रिय sensations को mammary ग्रन्थीहरूको को सुनिंनु द्वारा ट्रिगर हुन सक्छ। धेरै महिलाहरु बस अवधारणा पछि पहिलो हप्तामा बढ्न थालेका छन्। आफ्नो पेट स्तन मा अप्रिय पीडा ल्याउँछ मा तपाईं सुत्न भने, यो बानी र परिवर्तन मुद्रा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
निष्क्रिय सल्लाहकार ज्ञान को एक प्रामाणिक स्रोत फेला पार्न र तिनीहरूलाई सोध्न कसरी गर्भावस्था को समयमा सुत्न भने, तपाईं अचम्मको कुरा पाउनुहुनेछ। बच्चालाई तल दस्तक - तिनीहरूले पक्कै पनि यसलाई आफ्नो पेट मा सुत्न असम्भव छ भन्न हुनेछ। गर्न फिर्ता पनि सल्लाह छ मा झूठ छैन - बच्चा anoxia हुन्छ। सही पक्षमा - जिगर भोग्नेछन्, र यदि बायाँ - हृदय। एक अप खडा मात्र सुत्न वा यो खराब बानी अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, यो त डरलाग्दो छ।
म गर्भावस्था को समयमा आफ्नो पेट मा सुत्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंले हालसालै परिवार एक बच्चा हुनुपर्छ भनेर सिकेका भने, र आफ्नो आंकडा अझै परिवर्तन गरिएको छैन, त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो बानी परिवर्तन गर्न कुनै कारण छ। तथापि, दोस्रो trimester नजिक, पेट राउण्ड छैन पनि भने, आफ्नो पेट मा झूट गाह्रो हुन्छ। यो भन्ने तथ्यलाई गर्न धेरै हदसम्म कारण nalivshayasya छाती बस सहज प्राप्त रोक्छ।
किन यो गर्भावस्था को समयमा आफ्नो पेट मा सुत्न त असहज छ? गर्भमा बच्चा बाहेक थप र amniotic तरल पदार्थ हो। जो आन्तरिक अङ्गहरू, मा दबाव को यो प्रभावशाली रकम अलिकति सारे। प्रयास आफ्नो पेट मा झूठ गर्न भने, दबाव तपाईंको आफ्नै शरीर को वजन थपियो। र यो बच्चा र आमा को लागि साँच्चै खराब छ। म जो चिन्ता सबैलाई आश्वस्त पार्नुभयो गर्न चाहन्छ। एक गर्भवती महिला अक्सर उहाँले आफ्नो पेट मा सुत्न चाहन्छ भनेर भन्छन्। तर यो यो तुरुन्तै के मतलब छैन। सायद, त्यो अझै थाकेको र उहाँले एक आरामदायक स्थितिमा सुत्न सक्छ जब एक समय को सपना थियो।
आफ्नो पछाडि सुतिरहेको
यसलाई आफ्नो पेट मा पल्टिने गर्न असम्भव छ भने म, गर्भावस्था को समयमा आफ्नो पछाडि सुत्न सक्नुहुन्छ? यो भ्रूण को आकार मा धेरै हदसम्म निर्भर छ। सानो पेट विचलित हुन असम्भाव्य छ। तर यो स्थिति मा भारी गर्भाशय, को intestines र अन्य आन्तरिक अङ्गहरू मा दबाव राख्नु पनि मेरुदण्ड साथ चल्छ जो vena कावा, चिमोटे गर्न सक्नुहुन्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। तपाईं आफ्नो पछाडि सुत्न गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि कुनै बीस भन्दा बढी मिनेट, तपाईं यो स्थिति आराम गर्न सक्छन्। तर सो एक पक्ष बारी राम्रो हुनेछ। यो विशेष गरी अन्तिम हप्ता, एक रात आराम लागि सबैभन्दा सुरक्षित र आरामदायी स्थिति छ।
के पक्षमा गर्भावस्था को समयमा सुत्न?
तपाईं आफ्नो दायाँ छेउमा झूठ भने, तपाईं कलेजो मा पर्याप्त बेचैनी महसुस हुन सक्छ। हामी गर्भावस्था कारण, सबै आन्तरिक अङ्गहरू धेरै अस्थानिक स्थिति हो कि विचार भने, सामान्य असुविधाको पीडादायी अवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बायाँ तर्फ बारी भने, cardiologists सँगै तपाईं दोष हुनेछ। र यति रगत प्रवाह प्रदान, एक डबल बोझ सहन हृदय मात्र होइन आमा तर पनि बच्चा छ। के गर्ने?
वास्तवमा, केवल महिला आफु हुन सक्छ, जो पक्ष गर्भावस्था को समयमा सुत्न निर्धारण। यो बच्चालाई गरेको मुद्रा लागि safest छ, र त्यो पक्ष चयन गर्न के, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न साँच्चै छैन। गर्भवती बालिका सुतिरहेको को अवलोकन राती तिनीहरूले बारम्बार एकांतर प्रत्येक पक्ष र पछाडि थोडा मा वरिपरि बारी र सुत्न भनेर देखाएका छन्।
गलत मुद्रा को लक्षण
तपाईं गलत स्थितिमा फेरि झूट छन् भन्ने तपाईंलाई कसरी थाहा छ? मुख्य सूचक पनि छ एक गर्भवती को पेट महिला। एक बच्चा असहज छ भने, त्यो चटपटाउनु गर्न थाल्छ। तपाईं स्थिति परिवर्तन गर्न, उठ्नु छ त, झन्डै असम्भव संग सुतिरहेको। तपाईं आफ्नो पछाडि सुत्न गए भने, र पेट को वजन अन्तर्गत यो साँच्चै खोक्रो भियना, भ्रूण गर्न विचलित रगत आपूर्ति निचोडा थियो। बच्चा फेरि खुवाउने, संकेत आमा, यो रिसले चलखेललाई प्रतिक्रिया। Awakening मा, तपाईंले लामो पैदल थिए भने, यो कडा खुट्टा भन्ने महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यी बिगडा रगत आपूर्ति को नतिजा हो। यदि, तपाईंले गर्भावस्था को समयमा सुत्न कसरी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं - झपकी मात्र यसको पक्षमा झूट गर्न सक्नुहुन्छ।
सहज निद्रामा लागि तकियों
तपाईं बस सक्दैन पनि छेउमा काम प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं पेट रीस उठाउनु र दुखाइ फिर्ता कम र यो तकियों को एक आरामदायक ओछ्यानमा गठन गरेर सही गर्न सकिन्छ खींचती। निस्सन्देह, एक हाडजोर्नी गद्दा - सुन्दर कुरा हो, तर एक गर्भवती महिला को आंकडा फरक छ। कुहिनो - तपाईं एक सपाट तकिया पेट अन्तर्गत खतरा स्थिति आफ्नो पक्षमा, राख्न सक्छौं अतिरिक्त। कहिलेकाहीं सुविधाको लागि मात्र एउटा सानो रोलर माथि छ कि खुट्टा को गोडा तल अवस्थित। को कमर अन्तर्गत यस्तै नरम सहायक पनि गर्भावस्था को समयमा आफ्नो पीठ मा सुत्न, तर धेरै लामो समय अनुमति दिनुहोस्। निस्सन्देह, सबै भन्दा राम्रो विकल्प - गर्भवती महिला लागि विशेष तकिया, एक लम्बी नाल को रूप मा गरे। यो तपाईं पूर्ण आराम गर्न मद्दत गर्छ जो थैली एक प्रकारको, शरीर वरिपरि गठन गर्न अनुमति दिन्छ।
गर्भवती महिलाका लागि ब्रेस
के गर्न यदि तपाईं एक आरामदायक स्थिति पत्ता लगाउन व्यवस्थापन छैन, सो राहत ल्याउन छैन, सारा शरीर दुखाइ? पनि गर्भावस्था को समयमा आफ्नो पक्षमा सुत्न भने काम गर्दैन, तपाईंलाई एउटा विशेष corset वा पट्टी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हाडजोर्नी उत्पादनहरु यसलाई टिप्न एक विशेष फार्मेसी को आकार मा कडाई हुनुपर्छ। विक्रेता राम्ररी कसरी राख्नु र भोल्युम मिलाउन देखाउनेछ।
पट्टी समान रूप वजन वितरण, को बोझ को भाग माथि लाग्छ। तसर्थ, दिन कम थकित मांसपेशीमा समयमा, यो सजिलो तल बस्न र खडा गर्न, हिंड्न बन्नेछ। फलस्वरूप, साँझ तपाईं कम थकित र आराम गर्न सक्षम छन्। तपाईंलाई सुत्न गर्न सक्छन् corset, यो बिस्तारै पूर्ण आराम गर्न पेट समर्थन हुनेछ, त्यसैले। आफ्नो सपना हेरविचार! यो बल पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्छ नसाहरू tidies। गर्भवती लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले सान्त्वना आफैलाई वंचित छैन।
किन म गर्भावस्था को समयमा मासु गर्न चाहनुहुन्छ? के हराइरहेका शरीर?
कसरी प्रसब लागि तयार?
परिवार नियोजन: तपाईं के थाहा गर्नुपर्छ?
एक बच्चा गर्भ धारण गर्न मानिसहरू तयार: तपाईं जान्नु आवश्यक?
के भने सीजेरियन पछि गर्भवती एक वर्ष भयो: चिकित्सा राय
खैरो नाक - लक्षण र उपचार
चित्र, लक्षण र उपचार: शिशुहरू मा दाना
लेक Baikal र यसको मूल को इतिहास
गोप्य - यो तिनीहरूले आफ्नो मनपर्ने के थाहा छ। गोप्य - शब्द
Vibrocil: गाइड, समीक्षा, सिफारिसहरू
ससेज बलमा एक फूल कसरी बनाउने? फूल komozitsy लागि विचार
पिस्टन रङ कसरी बदलिन्छ?
"झुकाव" को अर्थ। गर्न व्यक्तिको क्षमता के छ
लाभ र व्यञ्जनहरु: को cranberries Compote
स्याउ को Salubrious भाग
व्यापक tapeworm - helminths बीच एनाकन्डा
कुनै पनि अपराध लागि तपाईं "VKontakte" ब्लक सक्छ